I-Raw Coluracetam powder (135463-81-9) Abavelisi - iFocoker
I-Raw Coluracetam powder iyilungu elitsha nelingqalileyo kwiklasi ye-racetam ye-nootropics yokwenziwa. Ekuqaleni phuhliswe njenge ... ..
Ividiyo ye-Raw Coluracetam (135463-81-9)
I-Raw Coluracetam powder (i-MKC-231) isichengechunge se-racetam esicelwa ukuba sibe yi-nootropic compound. Ingenawo ubungqina obuninzi bokuphanda, kodwa iindlela zokusebenza (kunye nesakhiwo) zibonakala zihluke kakhulu kwezinye i-racetam ezinjengePiracetam okanye i-Aniracetam.
I-Raw Coluracetam powder ibonakala idibanisa nenkqubo eyaziwa ngokuba yintsebenziswano ephezulu ye-choline (i-HACU efutshane), eyona nqanaba lokunciphisa izinga lokudweba i-neuron ukuze ihlanganiswe kwi-neurotransmitter acetylcholine. Ukwandisa izinga le-HACU kubonakala kunyuse umsebenzi we-nelinon cholinergic, ngoko kukujoliswe ekujoliseni ukuphuculwa kwengqondo.
I-powder Raw Coluracetam (135463-81-9) Suqobo
Igama lemveliso I powder iRaw Coluracetam
Inani leCAS 135463-81-9
I molecular Fi-ormula C19H23N3O3
I molecular WSibhozo 389.4
IMasaisotopic Mass 341.174 g / mol
IMisa eyiyo 341.174 g / mol
umbala Umhlophe ukuya kwi-Cyrstalline Solid Off-White
Sukufaneleka Akukho datha ekhoyo
Sisibetho Tukushisa Gcina kwiqondo lokushisa
Coluracetam Aukuguquka I-Raw Coluracetam powder (i-MKC-231) isichengechunge se-racetam esicelwa ukuba sibe yi-nootropic compound.
I powder Raw Rawra (135463-81-9) Inkcazelo
I-Coluracetam (i-MKC-231) isichengechunge se-racetam esicatshulwa ukuba siyinxalenye ye-nootropic. Uphando lubonisa ukuba luyakwazi ukuphucula ukuqonda kunye nememori, kwaye abasebenzisi bathi bakhucula ukugxininisa, ukugxila kunye nombono.
I-coluracetam powder isebenza ngokuyinhloko njengendlela yokuphucula umgangatho wokusebenza okhupha umsebenzi wokukhumbula imemori. Ngokukodwa ukhuthaza ukwanda kwe-choline, ukunyuka kwamanqanaba e-neurotransmitter acetylcholine ngokubonelela ngeyona nto eyenziwe kuyo. Ekubeni i-acetylcholine yi-neurotransmitter ehambelana kakhulu kunye nenkumbulo kunye nokuqonda, kukholelwa ukuba lo msebenzi ngumthombo oyintloko wempawu ze-nootropi ze-coluracetam.
I-Coluracetam ibaluleke kakhulu kwaye idinga umthamo omncinane kunamanye ama-nootropics eklasini. Ukusebenza ngokukhawuleza, ukufikelela kumazinga aphakamileyo kwiplasma ngaphakathi kwemizuzu ye-30 yokungena, kodwa kungaphantsi kweeyure ezintathu.
I powder (iRaw Coluracetam powder)135463-81-9) Indlela yokuSebenza
I-Coluracetam iphakamisa intsebenziswano ephezulu ye-choline (HACU), eyiyo inqanaba lokunciphisa umlinganiselo we-acetylcholine (ACh synthesis synthesis). Izifundo zibonise i-coluracetam powder ukuphucula ukukhubazeka kokufunda kwisinye somlomo esisodwa esinikwe kwiigos eziye zavezwa kwi-neurotoxins ye-cholinergic. Uphando olulandelayo luye lwabonisa ukuba lunokubangela ukuba iziphumo ezinokuhlala zihlala zihlala zikhona kwiinkwenkwe eziphethwe yi-neurotoxin ngokuguqula umgaqo-nkqubo we-transline.
benefits I powdercetam powder (135463-81-9)
I-Coluracetam inokuphucula imemori nokukwazi ukufunda
I-Coluracetam inokunceda kunyango lwexinzelelo oluchasene neziyobisi
I-Coluracetam inokunciphisa uxhala kunye nokuxhalabisa
I-Coluracetam inokuxhasa i-neurogenesis (ukukhula kweeseli zesisindo)
I-Coluracetam inokunceda ukuphatha i-schizophrenia
I-Coluracetam inokuphucula amehlo akho
I-powder Coluracetam ephakanyisiweyo (135463-81-9) Isistim
Ininzi yophando kwi-coluracetam yenziwe kwizilwanyana kunabantu, ngoko akukho zikhokelo zokufumana iifom. Uluhlu lwamathamo osebenzayo luchazwe ngokubanzi njenge-5-20 mg. Abasebenzisi be-coluracetam baye baxela uluhlu olubanzi lwee-doses ezilawulwa ngokusemthethweni nangokwezantsi.
Ingxelo yomsebenzisi ikhankanyile ukuba ukunyamezela kwi-coluracetam powder kunokukhula ngokukhawuleza. Njengawo onke amayeza, ngakumbi i-nootropiki, kukulungele ukuqala kumanani amancinci kwaye uphucule umthamo ngokuthe ngcembe njengoko umzimba wakho uphendule kwaye ulungiselele amayeza. I-Coluracetam ayiyona into enobuthi kwaye ithathwa njengeyinyamezelo kwaye ikhuselekile.
Imiphumela of IColuracetam powder (135463-81-9)
I-coluracetam powder ayiyona inetyhefu. Ngoko ke ithathwa njengenyameko kwaye ikhuselekile.
Imiphumo engabonakaliyo kodwa ingabandakanya ukuxhalaba, ukukhathala, iintloko, ukukhathazeka kunye nesiphithiphithi. Kwakhona, iziphumo zempembelelo zidla ngokuba ziphumo eziphezulu kakhulu ze-nootropic.
Abaninzi abasebenzisi bokuqala beColuracetam ukukhathala kwengxelo edla ngokuba ngumphumo wokuqala ngeqondo eliphezulu.